အလိုအလျောက်ရယူပါ။ အခြားသူ၏ Mobile Legends (ML) အကောင့်ကို ဟက်ခ်ရန် နည်းလမ်း2ခု - Big Question
Mobile Legends ဂိမ်းသည် ယနေ့ခေတ်ရေပန်းအစားဆုံး အခမဲ့ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဂိမ်းကို အခမဲ့ ကစားနိုင်သော်လည်း၊ ဤဂိမ်းသည် ဂိမ်းအတွင်း ဝယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့် ပေးထားသည်။ ဤဂိမ်းတွင် ဝယ်ယူမှုများကို ဖြည့်စွက်စာ သို့မဟုတ် ငွေသားလဲလှယ်မှုအဖြစ် မကြာခဏ ရည်ညွှန်းသည်။ ဖြည့်စွက်အားဖြည့်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂိမ်းအတွင်းရှိ ရှားပါးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Mobile Legends ဂိမ်းရှိ ရှားပါးပစ္စည်းများကို ဟီးရိုးဇာတ်ကောင်ပြသမှုပုံစံ သို့မဟုတ် အရေပြားဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ ဤအသားအရေသည် စျေးသက်သက်သာသာမှ အလွန်စျေးကြီးသောစျေးနှုန်းများရှိသည်။ သို့သော် စိတ်မပူပါနှင့်၊ ML အကောင့်ဟက်ခ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ skins အားလုံးကို သင်ရနိုင်သည်။
Mobile Legends အကောင့်ကို ဘယ်လို hack မလဲ။
A. ငါးဖမ်းခြင်းဖြင့် ML အကောင့်ကို ဘယ်လို hack မလဲ။
1. phishing site တစ်ခုဖန်တီးပါ။
2. ဖြားယောင်းသောလင့်ခ်များကို တင်သွင်းပါ။
B. Termux ဖြင့် မိုဘိုင်းဒဏ္ဍာရီအကောင့်ကို Hack သင်ခန်းစာ
1. Termux တွင် ပရိုဂရမ်ဖန်တီးပါ။
2. Hack ရလဒ်များကို စစ်ဆေးပါ။
ပြုစုသူ Mobile Legends ဂိမ်း Moonton သည် အစွမ်းထက်ဆုံး လုံခြုံရေးစနစ်ရှိသည့် ဂိမ်း developer များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Hacking ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဖောက်ထွင်းခံရခြင်း မဆိုထားနှင့်၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် ကစားသမားများကို ဖမ်းမိနိုင်ပြီး တားမြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ ခက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုဘူး မဟုတ်လား။ နည်းလမ်းသည် အကန့်အသတ်ရှိပြီး ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း သင်သည် ML အကောင့်များကို hack နိုင်ပါသေးသည်။
ဤသည်မှာ ML အကောင့်ကို ဘယ်လို hack ရမလဲ။
ငါးဖမ်းခြင်းသည် လိမ်လည်မှုပုံစံဖြင့် ရာဇ၀တ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေး ကျူးလွန်သူများသည် သားကောင်များကို စွဲမက်ဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်ဖြင့် သွေးဆောင်သည်။ သို့သော် တရားခံမသိဘဲ၊ ကမ်းလှမ်းမှုသည် လိမ်လည်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ကာဗာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ လိမ်လည်မှုသည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဤအခြေအနေတွင် ၎င်းသည် သင်၏ Mobile Legends အကောင့်ဒေတာဖြစ်သည်။
ဖြားယောင်းခြင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရာဇ၀တ်မှုများကို ကျူးလွန်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ဤသည်မှာ ဖြားယောင်းခြင်းဖြင့် ML အကောင့်ကို ဟက်ခ်နည်းအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ဆွေးနွေးထားသော ငါးဖမ်းခြင်းသည် ကြားခံဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှ တစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
ဤအဆင့်သည် Mobile Legends အကောင့်ခိုးယူမှုတွင်အဆုံးသတ်သည့် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် ဤအဆင့်တွင် ဝဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာကို ပြသပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤအဆင့်သည် ဤစီးရီးများတွင် အရေးကြီးဆုံးနှင့် အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။
Start option ကိုရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုခွင့်အခကြေးငွေကို အသုံးမပြုသောတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက် သင်၏ Google အကောင့်ဖြင့် လက်မှတ်ထိုးဝင်ပါ။
ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို လိုက်နာပါ။ ရွေးချယ်စရာပေါ်လာသည်အထိ ဝဘ်ဆိုဒ်အသစ်ဖန်တီးပါ။.
phishing ဝဘ်ဆိုက်၏အမည်နှင့် စကားဝှက်တို့ကဲ့သို့သော ပေါ်လာသည့်အကွက်အားလုံးကို ဖြည့်ပါ။
အားလုံးဖြည့်ပြီးသောအခါ၊ option ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဘို့.
ထို့နောက် psi File Manager ကိုရွေးချယ်ပြီး အောက်ပါဖိုင်များကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။ ငါးဖမ်း Web Scripts.
ဖိုင်အသစ်တစ်ခုကို ဖြည်လိုက်လျှင် ၎င်းသည် ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ပါ။ ဖွင့်လိုက်ပါ။.
email.php သို့မဟုတ် set.php ဟူသော ဖိုင်ကို ရွေးပြီး မီနူးကို ရွေးပါ။ တည်းဖြတ်ပါ။
သင့်အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထည့်သွင်းပါ။
Sultan ML အကောင့်ကို hack ရန် phishing ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဖန်တီးနည်း ပြီးပါပြီ။
သင်အသုံးပြုမည့်လင့်ခ်သည် အစောပိုင်းက သင်ဖန်တီးခဲ့သော phishing site ၏ URL ဖြစ်သည်။ ဒီနည်းလမ်းက လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ URL ကို Facebook အဖွဲ့၊ Discord သို့မဟုတ် တစ်ခုခုသို့ ပေးပို့ပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးသည် လင့်ခ်ကိုဝင်ရောက်ပြီး ML ဒေတာကိုဖြည့်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေပါက၊
မည်သူမဆို စိတ်ပါဝင်စားပြီး phishing site တစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏ ML ဒေတာကို ဖြည့်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင်သည် အီးမေးလ်တစ်စောင် လက်ခံရရှိပြီး Mobile Legends အကောင့်ကို ချက်ခြင်း လုံခြုံအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းအားဖြင့် သားကောင်သည် သင်လွှဲပြောင်းယူထားသောကြောင့် ၎င်း၏ ML အကောင့်ကို ပြန်မရနိုင်ပါ။
နောက် ML အကောင့်ဟက်ကာနည်းလမ်းကို ဆက်သွားပါ။
Termux သည် coding ကိုအသုံးပြုသည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုမျှဝေရန်အသုံးပြုသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ML အကောင့်များကို ဟက်ကာ အပါအဝင် ပရိုဂရမ်းမင်းအတွက် အသုံးဝင်သည့် ကုဒ်ပုံစံဖြင့် အချက်အလက်များကို တင်သွင်းနိုင်ပြီး ပြသနိုင်သည်။
Termux ကို Fredrik Fornwall မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး Google Play Store မှတဆင့် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤပရိုဂရမ်းမင်းအပလီကေးရှင်းကို 2015 ခုနှစ် ဇွန်လ 30 ရက်နေ့တွင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အကြိမ်ရေ 10 သန်းကျော်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် စူလတန်၏ Mobile Legends အကောင့်ကို ဤနည်းဖြင့် hack ချင်သူများသည် ဤလျှောက်လွှာကို ဦးစွာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး အောက်ပါ Termux အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ ML sultan ၏အကောင့်ကို hack ရန်နည်းလမ်းကို လိုက်နာပါ-
သင်သည် အခြားသူများ၏ ML အကောင့်များကို ရယူရန် termux ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ။
1. Termux အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပါ။
ဖွင့်ပြီးသည်နှင့်၊ အောက်ပါ script ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင့်လျော်သော update ကို
သင့်လျော်သော update -y
pkg bash-y ကို install လုပ်ပါ။
pkg git-y ကို install လုပ်ပါ။
pkg ကို python2-y ထည့်သွင်းပါ။
pkg အိမ်သာ-y တပ်ဆင်ပါ။
pkg figlet-y ကို install လုပ်ပါ။
pkg ကို ruby-y ကို install လုပ်ပါ။
gem lolcat ကို install လုပ်ပါ။
2. အောက်ပါ command ဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ script ကို ထည့်သွင်းပါ-
အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် ML hack script ကိုစတင်ပါ။
5. Login page ပေါ်လာပါမည်။ အောက်ပါအကောင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်ပါ။
6. အထက်အကောင့်ဖြင့် လော့ဂ်အင်ဝင်ပြီးနောက်၊ သင်သည် ဇာတ်ညွှန်းစာမျက်နှာသို့ ပြန်ညွှန်းခံရလိမ့်မည်။
7. 5th Mobile Legends အကောင့်ဟက်ခ် script ကိုရွေးချယ်ပါ (pkg ကို python2-y ထည့်သွင်းပါ။)
8. ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လင့်ခ်တစ်ခုပေါ်လာပါမည်- .
9. ပေးပို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သားကောင်များအတွက် သို့မဟုတ် Mobile Legends အကြောင်းကို ဆွေးနွေးနေသည့် အဖွဲ့များထံ ဖြစ်နိုင်သည်။
10. သားကောင်သည် လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီး ဒေတာဖြည့်ပါက၊ သင်၏ termux အပလီကေးရှင်းတွင် နောက်ထပ်ဒေတာများ ရှိလိမ့်မည်။
ဤပရိုဂရမ်းမင်းအပလီကေးရှင်းဖြင့် Mhytic ML အဆင့်အကောင့်ကို ဟက်ခ်နည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ရလဒ်များ ရှိမရှိကြည့်ရှုရန်၊ သင် Termux အက်ပ်လီကေးရှင်းကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းကိုဖွင့်ပါက၊ အောက်ဖော်ပြပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင့်ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ နံပါတ်3ကိုနှိပ်ပါ။
သင်မျှဝေထားသည့် လင့်ခ်ကို သင်နှိပ်သည့်နေရာတွင် Mobile Legends အကောင့်ဒေတာမျက်နှာပြင် ပေါ်လာပါမည်။
ဆောင်းပါးပါ နည်းလမ်းနှစ်ခုတွင် Sultan ML အကောင့်ကို ဟက်ခ်နည်းတွင် တူညီသောအချက်မှာ Phishing နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟက်ခ်နည်းလမ်းသည် တူညီသောကြောင့် ၎င်းတို့ နှစ်ခုလုံးတွင် တူညီသော အဓိက အားနည်းချက်တစ်ခု ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည့် လင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး ML ဒေတာကို ဖြည့်သွင်းရန် မည်သူမဆို စိတ်ဝင်စားခြင်း ရှိ၊ မရှိ မသေချာပါ။ ထို့ကြောင့် သားကောင်ကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်စေရန် စိန်များ၊ လက်ဆောင်အရေခွံများနှင့် အခြားအချိုရည်များကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ ML အကောင့်ကို ပိုဂရုစိုက်နိုင်စေဖို့ ဒီဆောင်းပါးကို ပညာတစ်ခုအနေနဲ့သာ ဖန်တီးထားရင် ကောင်းလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည် အခြားသူ၏ ML အကောင့်ကို ဟက်ခ်လုပ်ပါက၊ တစ်ညလုံး ဖြည့်စွက်မှု/တွန်းအားပေးမှု သန်းပေါင်းများစွာရှိနိုင်သည့် သားကောင်ကို ထိခိုက်စေမည်မှာ သေချာပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် ဤနည်းလမ်းကို အကြံပြုလိုသည်မဟုတ်ပါ၊ သင့်အနေနှင့် ရှိပြီးသားအကောင့်ကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦး၏အကောင့်ကို ဝယ်ယူခြင်းသည် သင့်အတွက် ပိုကောင်းပါသည်။
«5နောက်ဆုံးထွက် Mobile Legends အကောင့် Hack အက်ပ်များနှင့် ကျူတိုရီရယ်များ
What Happens In The Story The Most Dangerous Game »